ကဗျာ - Yangon Nation News
ကဗျာ , January 03, 2021
“An Ode to my Beloved Hinnthama” Water water everywhere Our wings are now weary Where can we stop Only one...
“ဖေဖေ့စားပွဲမှာ လာရှုပ်ပါလှဲ့” (မင်းကိုနိုင်)
ကဗျာ , December 12, 2020
“ဖေဖေ့စားပွဲမှာ လာရှုပ်ပါလှဲ့” . တနေ့ကျရင်ကလေးတွေကို ဝလုံး​ရေးနည်းသင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ စာရေးတာမရှိ ၊စာရိုက်တာပဲရှိတော့မယ်တဲ့။ ဘုရားရေ ဒါဆိုငါစာရေးဆရာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ ဖြစ်ခြင်းဖြစ် စာရိုက်ဆရာပဲဖြစ်တော့မပေါ့။ အဲဒီအခါ လက်ရေးလှမကျင့်ရတော့လို့ ပျော်ချင်လည်းပျော်ကြပေါ့ ပြိုင်စရာတစ်ခုပျောက်သွားလို့ နာချင်လည်းနာကြပေါ့။ တစ်နေ့မှာ ကျောင်းထားမထား စဉ်းစားရတာတွေ...
“ဗိုလ်အောင်ဒင်ကြီး စန္ဒယားတီးနေပြန်ပြီ ” (မင်းကိုနိုင်)
ကဗျာ , November 02, 2020
ဗိုလ်အောင်ဒင် ကိုဖမ်းမိကြောင်းကြွားဖို့ မမြဝင်းအိမ်ခေါ်သွား ထားခဲ့တဲ့ ကိုကိုချစ်အမှားလား ဓားပြဗိုလ်ကိုမှ စန္ဒယားပြင်ခိုင်းမိတဲ့ မမြဝင်းအမှားလား လက်ထိပ်ဖြုတ်ပေးပြီး ဓား​ပြဗိုလ်ရဲ့ စန္ဒယားလက်သံမှာ မျောပါခဲ့တဲ့ ပုလိပ်သားလေးအမှားလား ဗိုလ်အောင်ဒင်ကား ပြန်ပြတိုင်း ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ ပုလိပ်သားလေးက ပါးချိတ်ယားနေပြီ။ ……………… “ဗိုလ်အောင်ဒင်ကြီး...
ကဗျာ , October 17, 2020
“ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့နဲ့ ဆင်တူနေ့” ————————————- လူ့ကိုယ်မှာ သကြားများများ လိုတယ် အက်စစ် လိုတယ် မှားတာမှန်တာ လိုတယ် အေး၊ ဟိုမုန်းလဲ လိုတာပေါ့။ လမ်းဖြတ်ကူးရင်း အငွေ့ပျံသွားတော့မယ့် ဟေ့လူ စီးဝင်ခြင်း၊ မာခဲခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်း လောင်ကျွမ်းခြင်းဓါတ်များ...
ကဗျာ , September 24, 2020
တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်….. မီးပျက်တဲ့နေ့တွေညတွေ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ထိုင်ရင်းရည်ရွယ်ချက်တွေ မဲ့ခဲ့ဘူးတယ်။ BMလိုင်းကားရဲ့ရေသရောက်ကို အားပြုပြီးသေရေးရှင်ရေးတွယ်စီးခဲ့ဘူးတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းလို့ နံမည်တပ်ထားတဲ့နယ်မြို့က အထက ကျောင်းမှာကျောင်းတက်ခဲ့ဘူးတယ်။ သင်ဃန်းကျွန်းဆို လမ်းကြမ်းလို့မလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ က taxi တွေမြင်ခဲ့ဘူးတယ်။ ဇင်ပိတ်အပြာကိုပြောင်းပြန်လှန်၊အပ်ချည် အနီနဲ့ နင်းလို့ချုပ်ထားတဲ့ဂျင်းဂျက်ကက် ဆိုတာကို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ကဗျာကိစ္စ ဆရာသစ္စာနီ ရှင်းပြီ
ကဗျာ , September 16, 2020
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ကဗျာကိစ္စ ဆရာသစ္စာနီ ရှင်းပြပါပြီ self quarantine ဝင်နေတဲ့ မင်းထင်ကိုကိုကြီးက မက်ဆေ့ခ်ျဘောက်စ်ကနေမေးလာပါတယ်။ကျနော်ကမာယာကော့စကီးအသဲစွဲ။အိမ်မှာလဲသူ့ကဗျာစာအုပ်ရှိတယ်။ ကျနော်တော့အဲသလိုတူတဲ့ကဗျာမတွေ့ဖုးဘူး၊၊သေချာအောင်ရှာပြီးအကြောင်းပြန်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။လိုင်းပေါ်တက် ဂူဂဲလ်မှာရော ဝီကီပီဒီးယားမှာရောရှာတယ်။ ခေါင်းသာမူးသွားတယ်၊မတွေ့။ သူတို့တင်ထားတဲ့ကဗျာပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ ရှင်းသွားတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာလိုရေးထားတာကို၏သည်၍ မလွဲလုံးကောက်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးထားတာကိုး။ လုပ်ကြံထားမှန်းသိသာတယ်။တင်တဲ့သူဆုတင်ကမြတ်သန်းထိုက်ကို credit ပေးထားတယ်။အရင်ကမြန်မာ...
ဓားရဲ့ရင်ဝမှာ စိုက်ဝင်နေတဲ့ နှင်းဆီ (ညီမင်းညို)
ဓားရဲ့ရင်ဝမှာ စိုက်ဝင်နေတဲ့ နှင်းဆီ •••••••••••••••••••••••••••••• ဓားဟာ လေထဲပျံသန်းလာ ပျံသန်းရင်း တွေဝေ ပန်းရနံ့ဟာ သူ့လိုဘ ဟုတ် မဟုတ် ဒါပေမဲ့ အဖြေဟာ ပန်းတစ်ပွင့်စာ နောက်ကျခဲ့တယ် ရလဒ်က သွေးညှီနံ့ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဓားဟာ...
ကဗျာ , September 13, 2020
“Demons Who Eat Hors-doeuvre” ________________ Ko Ko(Gant-Gaw) Once uponatime, There were three closet friends of mine Under my...
ကဗျာ , September 06, 2020
The Poetry We FeelaVacuum in our Heart. ____________________ With the metres of the bark, The rimes of the...
” မစုရဲ့ကဗျာစိတ် “
ကဗျာ , September 05, 2020
မစုရဲ့ကဗျာစိတ် ၁၉၉၉ခု ၊ စာဆိုတော်နေ့ NLD ရုံးချုပ်မှာ ဟောပြောဖို့ ကျွန်တော်နဲ့ကြည်အောင်ကို ဖိတ်ပါတယ် ။ ပထမ ကြည်အောင်ဟောပါတယ် ၊ ဝိတိုရိယခေတ် ကဗျာများကို ညှပ်ပြီးဟောပါတယ် ။ နောက် မစု...